वि.सं. २०७५ वैशाख ११ गते मंगलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल २४ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > वि.सं. २०७५ वैशाख ११ गते मंगलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल २४ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस
भोलि केही कामको सुरुवात गर्दा होसियार पूर्वक गर्नु होला । शारीरिक र मानसिक तनाब भएको महसुस गर्नुहुनेछ। निन्द्रा नपुगेको कारणले स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्नेछ । वाद-विवादबाट टाढा बस्नुहोला ।
भोलि तपाईंको काम सम्पन्न भएको कारण तपाईंको मन प्रशन्न रहनेछ। भाई – बहिनीबाट फाईदा मिल्नेछ। शारीरिक र मानसिक रुपबाट नै तपाईं खुशी महसुस गर्नुहुने छ। आर्थिक लाभ हुने योग छ। आफुसँग भएको धन धेरै मात्रामा खर्च हुने देखिन्छ।
असन्तुस्टीको भावनाले मन तनाव रहनेछ। शारीरिक रूपबाट पनि तपाईं कमजोरी महसुस गर्नु हुनेछ। पढाई-लेखाइमा मन नलाग्ने र अल्छि लागेको महसुस गर्नु हुनेछ। तर साझबाट भने स्थिति अनुकूल भएको महसुस गर्नुहुनेछ
आफ्नो भावनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला। कही जाने अथवा पाहुनाहरु आउनुहुने योग छ। दिन तपाईंको स्वास्थ्यमा राम्रो र मन पनि प्रशन्न रहनेछ। तर साझमा भने मनमा विभिन्न कुरा खेलेको कारण स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउने देखिन्छ।
पारिवारिक समस्याको कारणले घरमा समस्या हुने देखिन्छ। अरुसँग कुरा गर्दा बिचार गरेर मात्रै बोल्नुहोला। आफ्नै बोलीले समस्यामा पर्ने देखिन्छ। गलत बिचारलाई मनमा नराख्नुहोला । आफन्तसँग मनमुटाब हुने योग छ। तर साझ पख साथीसँगको भेटबाट मन प्रशन्न हुनेछ।
भोलि तपाईंको दिन मध्यम फलदायी रहनेछ। परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले मन सुख र शान्त रहनेछ । व्यावसायिक क्षेत्रमा बातावरण अनुकूल रहनेछ। वाणीमा सहनता राख्नुहोला, धनहानिको साथ-साथै मानहानि पनि हुने योग छ।
भोलि तपाईंको दिन मध्यम फलदायी रहनेछ। परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले मन सुख र शान्त रहनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रमा बातावरण अनुकूल रहनेछ। वाणीमा सहनता राख्नुहोला, धनहानिको साथ-साथै मानहानि पनि हुने योग छ।
भोलि तपाईंको दिन मध्यम फलदायी रहनेछ। परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले मन सुख र शान्त रहनेछ । ब्यवसायिक क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल रहनेछ। वाणीमा सहनता राख्नुहोला, धनहानिको साथ-साथै मानहानि पनि हुने योग छ।
भोलि तपाईंको दिन मध्यम फलदायी रहनेछ। परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले मन सुख र शान्त रहनेछ । ब्यवसायिक क्षेत्रमा बातावरण अनुकूल रहनेछ। वाणीमा सहनता राख्नुहोला, धनहानिको साथ-साथै मानहानि पनि हुने योग छ।
भोलिको दिन तपाईं परिवारको साथ आनंदपूर्वक यात्राको आनन्द लिनु हुनेछ। तर मध्याह्न पछी भने तपाईंको मनमा विभिन्न कुराहरु खेल्ने छ । अधिक खर्च हुने योग छ। सरकारी काम गर्दा ध्यान पूर्वक गर्नुहोला।
भोलि तपाईंको दिन सुख-शांतिपूर्वक बित्नेछ । पारिवारिक जीवनमा आनन्द छाउनेछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। मनोरञ्जनको साथ साथ यात्राको पनि योग छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि निकै लाभ हुने योग छ।
कुनै पनि प्रकारको व्यक्तीसँग वाद-विवाद नगरनु होला । नयाँ काम को सुरुवात नगर्नुहोला। तर मध्याह्न पछी भने सबै कुरामा सुधार आउने छ । शारीरिक र मानसिक रूपबाट नै स्वस्थताको अनुभव गर्नुहुनेछ।
रूपन्देहीबाट आयो दुःखद खबरः सडक दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटनाः घाइते भन्छिन्, ‘बसबाट श्रीमानले छोरालाई फाल्नुभयो’
सत्ताशक्तिको धा’कमा स्त्रीलाई फकाएर, धम्काएर यु’टर्न गराइयो : भट्टराई